Da'da dijitalka ah ayaa samaynta tijaabada ah ee tijaabada ah ee adag in la barbardhigo oo abuuro fursado cusub oo laga yaabo inay siyaabo kala duwan u dhacdo.
Taariikhda tijaabinta, waxaa jiray laba waji oo tartamaya: hababka saami-sameynta iyo hababka saami-sameynta aan la iiga dhicin. Inkasta oo labadaba loo isticmaali jiray maalmaha hore ee tijaabada, saamiga suurtogalka ah ee ay soo saareen waxay u muuqdaan kuwo madaxbannaan, cilmi-baarayaal badan oo bulsheedna waxaa la baraa in ay u arkaan in ay u arkaan in aan loo maleyneynin in ay la socoto shaki weyn. Si kastaba ha noqotee, sida aan hoos ku sheegi doono, isbeddelada ay sameeyeen da'da dijitaalka micnaheedu waa wakhtiga cilmi-baadhayaasha si ay dib-ugu-fiirsan u-qaadista u-qaadista. Gaar ahaan, sifeynta suurtagalka ah waxay ku adkaatay in ay noqoto mid ficil ahaan ah, iyo in aan la yiraahdo sifududnaanta aan la yiraahdo waxay sii socotaa mid deg deg ah, jaban, iyo ka sii wanaagsan. Sahamooyinka degdega ah iyo kuwa ka jaban maaha kali ahaantooda: waxay suurtogeliyaan fursado cusub sida sahanno badan iyo tirooyin ka weyn. Tusaale ahaan, adoo isticmaalaya hababka aan la filaynin, Daraasada Doorashooyinka Kombuyuutarrada Kombuyuutarada (CCES) waxay awood u leeyihiin inay qiyaastii 10 jeer ka badan kaqaybgalayaashu ka soo qaybgalaan daraasadaha hore iyadoo la adeegsanaayo saamiga suurtogalka. Saameyntan aad u weyn ayaa suurtagal u ah cilmi-baarayaasha siyaasadeed in ay baraan kala duwanaanshaha habdhaqanka iyo dabeecadaha ee kooxaha hoose iyo hab-nololeedka bulshada. Dheeraad ah, dhammaan cabbiraaddan oo dhan ayaa timid iyada oo aan la dhicin tayada qiyaasaha (Ansolabehere and Rivers 2013) .
Waqtiga xaadirka ah, habka ugu habboon ee lagu baaro cilmi-baarista bulshada waa saami-sameynta . Sifeynta suurtagalnimada, dhammaan xubnaha dadweynaha ee la beegsanayo ayaa la og yahay, macquul ma'aha in la tijaabiyo, iyo dhammaan dadka lagu baaro jawaabta sahanka. Marka shuruudahaas la buuxiyo, natiijooyinka xisaabta ee qarsoon waxay bixiyaan dammaanad la isku halleyn karo oo ku saabsan kartida cilmi-baarayaasha si ay u isticmaalaan muunadda si ay u sameeyaan geeddi-socod ku saabsan dadweynaha la beegsanayo.
Si kastaba ha noqotee, xaalada dhabta ah ee xisaabta natiijada xisaabtani marar dhif ah ayaa la kulmay. Tusaale ahaan, waxaa jira badanaa khaladaadka caymiska iyo jawaab-celin la'aanta. Dhibaatooyinkaas awgood, cilmi-baarayaashu inta badan waa inay shaqeeyaan habab kala duwan oo isbeddel ah si ay uga dhaadhiciyaan inay tusaaleeyaan dadkooda. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in la kala saaro udhigista saami-sameynta ee aragtida , kaas oo leh dammaanad dareen ah oo xoog leh, iyo saameynta kala-shaandhaynta ee ficilka , kaas oo aan bixin dammaanad noocaas ah waxayna ku xiran tahay isbeddel tirooyin kala duwan.
Waqti ka dib, farqiga u dhaxeeya saami-sameynta suuragalnimada ee aragtida iyo saameynta suurtogalka ah ee ficil ahaanta ayaa sii kordhaya. Tusaale ahaan, heerarka aan saluugsaneyn ayaa si joogto ah u kordhayay, xitaa tayada sare, qiimeyn qaali ah (sawirka 3.5) (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Heerarka aan saldhigga lahayn ayaa aad uga sarreeya baaritaanada teleefonada-mararka qaarkood xitaa xataa 90% (Kohut et al. 2012) . Kuwani waxay kor u qaadaan jawaab la'aanta waxay khatar ku yihiin tayada qiyaasta sababtoo ah qiyaasuhu waxay ku xiran yihiin moodooyinka tirakoobka ee cilmi-baarayaashu isticmaalaan si loo hagaajiyo jawaab la'aan. Intaa waxa dheer, hoos u dhaca tayada ayaa dhacay, inkastoo dadaal badan oo qaali ah ay sameeyeen cilmi-baarayaasha si ay u ilaaliyaan heerka jawaab celinta sare. Dadka qaar ayaa ka baqaya in labadan isbeddel ee yaraanta tayada iyo qiimaha sii kordhaya ay halis galiyaan aasaaska cilmi baarista sahanka (National Research Council 2013) .
Jaantuska 3.5: Jawaab-celin la'aan ayaa si joogto ah u socotay, xitaa qiimeyn qaali ah oo tayo sare leh (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Heerarka aan saldhigga lahayn ayaa aad uga sareeya sahanka telefoonka, marmarka qaarkood xataa 90% (Kohut et al. 2012) . Isbedelada muddada fog ee la'aanta jawaab-celin micnaheedu waa in ururinta xogtu ay qaali tahay, qiyaastuna waa mid aan la isku hallayn karin. Laga soo bilaabo BD Meyer, Mok, and Sullivan (2015) , sawirka 1.
Isla mar ahaantaana ay jiraan dhibaatooyin sii kordhaya ee hababka saami-sameynta, waxaa sidoo kale jira horumarin xiiso leh oo ah hababka saami-sameynta ah ee aan dhici karin . Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah hababka kala-soocista aan la iqaabin karin, laakiin waxa kaliya ee ay wadaagaan waxay tahay in aysan si fudud ugu habooneyn qaabka xisaabeed ee sifeynta saamiga (Baker et al. 2013) . Si kale haddii loo dhigo, hababka saami-sameynta ee aan la dhicin in qof kastaa uu hayo wax la yiraahdo iyo kuwa aan isku mid ahayn ee lagu daro. Hababka saami-sameynta ah ee aan macquul ahayn waxay leeyihiin sumcad xun oo ka dhexjirta cilmi-baarayaasha bulshada, waxayna ku xiran yihiin qaar ka mid ah cilladaha ugu waawayn ee cilmi-baadhayaasha sahanka, sida falsafada suugaaneed ee hore (hore looga dooday) iyo "Dewey Defous Truman", saadaasha khaldan ee Maraykanka doorashadii madaxweynenimada ee 1948 (sawir 3.6).
Jaantuska 3.6: Madaxwaynaha Harry Truman wuxuu hayaa cinwaanka wargeyska si khalad ah u shaaciyay guuldaradii. Mawduucani wuxuu ku saleysnaa qiyaasta qiyaasaha shaybaarada aan la dhicin (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) . Inkasta oo "Dewey Defous Truman" ay dhacdey 1948-kii, weli waa ka mid ah sababaha cilmi-baarayaashu ay ka walaacsan yihiin qiyaasaha shay-baarka aan macquul ahayn. Waxaa laga soo xigtay: Harry S. Truman Library & Museum .
Mid ka mid ah shay-baarka aan khasaare ahayn ee ku habboon da'da dijitalka waa isticmaalka shabakadaha internetka . Cilmi-baareyaasha isticmaalaya qalabyada internetka waxay ku xiran yihiin bixiyeyaasha xayiraadda-badanaa-shirkad, dawlad, ama jaamacad - inay dhisaan koox ballaaran oo kala duwan oo oggolaaday inay u adeegaan sidii jawaab-celiyeyaasha sahanka. Ka-qaybgalayaasha qabiilladan waxaa inta badan lagu shaqaaleeyaa iyada oo la adeegsanayo habab kala duwan oo kala duwan sida xayeysiisyada internetka ee banner. Dabadeed, cilmi baaruhu wuxuu bixin karaa bixiyaha guddiga si loo helo maaddo ka mid ah jawaab bixiyayaasha leh sifooyinka loo baahan yahay (tusaale, wakiil qaran ee dadka waaweyn). Nidaamyadaan internetka waa habab aan loo badin karin sababtoo ah qof walbaa lama ogaa in uu yahay mid aan la ogaan karin. Inkasta oo laga yaabo in aan loo baahneyn in la isticmaalo cilmi-baarayaasha bulshada (tusaale ahaan, CCES), haddana weli waxaa jira doodo ku saabsan tayada qiyaasaha ka soo baxa (Callegaro et al. 2014) .
Inkasta oo doodahaani ay jiraan, waxaan qabaa in ay jiraan laba sababood oo waqtiga saxda ah ee cilmi-baadhayaasha bulshada ay dib-u-fiirinayaan sifududka aan loo baahneyn. Marka hore, da'da dijitaalka, waxaa jiray horumarin badan oo ururinta iyo falanqaynta shaybaarro aan macquul ahayn. Hababka cusub ee cusubi way ka duwan yihiin hababka keena dhibaatooyinka horey u soo maray taasoo aan u malaynayo inay macno u leedahay inay ka fekeraan "sida aan u badneyn shaashadda 2.0". Sababta labaad ee cilmi-baadhayaashu waa inay dib uga fakaraan saami-sameynta aan la dhicin waxay sababtoo ah samaynta tijaabada dhaqanka ayaa sii adkaanaysa. Marka ay jiraan heerar sare oo aan wax-ka-qabin-sababtoo ah waxaa jira baaritaano dhab ah hadda - suurtagalnimada dhabta ah ee ka mid noqoshada dadka la wareystey lama garanayo, sidaas awgeed, shaybaarka ixtimaalka iyo shaybaarada aan macquul ahayn maaha sida kuwa cilmi-baarayaal badani aaminsan yihiin.
Sidaan horay u sheegay, shay-baarka aan macquul ahayn waxaa lagu arkaa shaki weyn oo ay sameeyaan cilmi-baarayaal bulsheed, qayb ahaan sababtoo ah kaalintooda qaar ka mid ah guuldarooyinka ugu liitaa ee maalmaha hore ee cilmi-baarisyada sahanka. Tusaale ahaan sida aan u helnay shaybaarka aan ku dhicin waa cilmi baaris ay sameeyeen Wei Wang, David Rothschild, Sharad Goel, iyo Andrew Gelman (2015) oo si sax ah u soo kabtay natiijada doorashadii 2012 ee Maraykanka iyadoo la adeegsanayo muunad aan la saadaalin karin Isticmaalayaasha Xbox America - waa tijaabo aan la aqbali karin oo Maraykan ah. Cilmi-baadhayaashu waxay qorayeen jawaab-celiyeyaasha ka socda nidaamka ciyaaraha XBox, iyo sida aad filan karto, tusaalaha Xbox-ka ayaa roonaaday rag iyo da 'yaryahay: 18-jir ilaa 29-jiradu waxay ka dhigaan 19% dadka codbixiyayaasha ah, laakiin 65% saamiga Xbox iyo ragga boqolkiiba 47% codbixiyayaasha laakiin 93% ka mid ah tusaalaha Xbox (sawirka 3.7). Sababtoo ah tirooyinka xooggan ee dadku aad u xoogan yihiin, xogta Xbox ee cowsku waxay ahayd tilmaam xumo oo ah dib u soo noqoshada doorashada. Waxa ay saadaalisay guushii xoogganayd ee Mitt Romney ka qaaday Barack Obama. Mar labaad, tani waa tusaale kale oo khatar ah oo ka mid ah shayada aan caadiga ahayn ee aan caadiga ahayn, loona yareeyey loona dar-dar geliyay falsafada qoraalka.
Jaantuska 3.7: Nooca dadka ka jawaabaya W. Wang et al. (2015) . Sababtoo ah dadka la wareystey waxaa laga soo qortay XBox, waxay u badnaayeen inay noqdaan kuwo da 'yar waxayna u badan tahay inay noqdaan rag, iyaga oo tixgelinaya codbixiyayaasha doorashadii 2012. Waxaa laga soo qaatay W. Wang et al. (2015) , sawirka 1.
Si kastaba ha noqotee, Wang iyo shaqaalahoodu way ka warqabeen dhibaatooyinkan oo waxay isku dayeen inay isku hagaajiyaan nidaamkoodii tijaabada ahaa ee aan la kala soocayn marka la qiyaasayo. Gaar ahaan, waxay adeegsadeen post-stratification , farsamo kaas oo sidoo kale loo isticmaalo si loo soo dajiyo shaybaarka suurtagalka ah ee leh khaladaadka caymiska iyo kuwa aan wax jawaab aheyn.
Fikradda ugu weyn ee dib u dhiska ayaa ah in la isticmaalo macluumaad ku saabsan dadweynaha bartilmaameedka ah si loo hagaajiyo qiyaasta ka timid muunad. Markii loo adeegsanayay dib-u-dhigis si loo qiyaaso tusaalayaal aan la ogaan karin, Wang iyo asxaabtiisi ayaa ku biiray dadweynaha kooxo kala duwan, lagu qiyaasay taageerada Obama ee koox kasta, ka dibna waxay qaadatay celcelis culeys leh qiyaasta kooxda si loo soo saaro qiyaas guud. Tusaale ahaan, waxay ku kala qaybin lahaayeen laba kooxood (ragga iyo dumarka), ayaa lagu qiyaasey taageerada Obama ee ragga iyo dumarka, ka dibna lagu qiyaasay taageerada guud ee Obama iyadoo la qaadanayo celcelis culus si loo xisaabiyo xaqiiqda ah in haweenku sameeyaan ilaa 53% dadka cod bixinta iyo ragga 47%. Qiyaas ahaan, dib u dhigiddu waxay ka caawisaa sidii loo saxi lahaa saamiga isku dhafka ah adoo keenaya macluumaad fara badan oo ku saabsan xajmiga kooxaha.
Fure u noqoshada dib-u-dhiska waa inuu sameeyo kooxo sax ah. Haddii aad dad kale u soo jiidi karto kooxo isku dhafan sida soo-jeedinta jawaab-celinta waa isku mid dadka oo dhan ee koox kasta, ka dibna dib-u-dhigiddu waxay soo saari doontaa qiyaaso aan caadi ahayn. Si kale haddii loo dhigo, dib-u-dhejinta jinsiga ayaa soo saari doona qiyaaso aan caadi ahayn haddii dhammaan ragga ay leeyihiin hab-raaca jawaabta oo dhammaan haweenku ay leeyihiin muraayad isku mid ah. Tixgelintaas waxaa loo yaqaana habdhaqanaha-jawaab-celin-koox-kooxeedyo , waxaanan ku tilmaamayaa waxoogaa ka badan qoraalada xisaabta dhamaadka cutubkan.
Dabcan, waxay u muuqataa inaan laga yaabo in mowqifka jawaab-celintu ay isku mid noqdaan dhammaan ragga iyo dumarka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, fikradaha isku-dhafan ee jawaab-celinta-koox-kooxeedyadu waxay noqonayaan mid aan la aqbali karin marka tirada kooxdu ay korodho. Qiyaas ahaan, waxay noqoneysaa mid sahlan in dadweynaha ay ku biiraan kooxo isku dhafan haddii aad abuurayso kooxo badan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay u muuqato in dhammaan haweenku ay leeyihiin isla macaamilka jawaabta, laakiin waxa laga yaabaa inay u muuqato mid la yaab leh in ay jirto isbeddel jawaabta dhammaan dumarka da'doodu u dhaxayso 18-29, oo ka qalin-jebisay kulliyadda, iyo kuwa ku nool California . Sidaa darteed, marka tirada kooxeed ee loo isticmaalo dib u-dhiska waxay sii weynaanaysaa, fikradaha loo baahan yahay si ay u taageeraan habka ay u noqdaan kuwo macquul ah. Marka la eego xaqiiqda, cilmi-baarayaashu waxay inta badan doonayaan in ay abuuraan tiro aad u tiro badan oo ka mid ah koox-hawleedka. Si kastaba ha noqotee, marka tirada kooxdu ay korodho, cilmi-baarayaashu waxay ku dhacaan dhibaato kale: kala-baxa xogta. Haddii ay jiraan dad tiro yar oo ka mid ah koox kasta, markaa qiyaasaha ayaa noqon doona mid aan la hubin, iyo kiis ba'an oo ay jirto koox aan haysan wax jawaab ah, ka dibna dib u dhiska ayaa gebi ahaanba burburaya.
Waxaa jira labo siyaabood oo ka mid ah xiisaddan u dhaxeysa udhexeeya ujeedada ujeedada jawaab-celin-koox-dhexdhexaadin iyo baahida loo qabo qiyaasta sicirada macquul ee koox kasta. Marka hore, cilmi-baarayaashu waxay soo ururin karaan tijaabo ka weyn oo ka sii badan, kuwaas oo ka caawiya xaqiijinta cabirada muunada saxda ah ee koox kasta. Marka labaad, waxay isticmaali karaan tusaalooyin tirakoob oo casri ah si loo qiyaaso kooxo kooxeed. Iyo, xaqiiqda, mararka qaar cilmi-baarayaashu waxay labaduba sameeyaan, sida Wang iyo jaaliyadaha ay ku sameeyeen daraasaddooda doorashadooda iyaga oo isticmaalaya jawaabeyaasha Xbox.
Sababtoo ah waxay isticmaalayeen habka saami-sameynta oo aan la qiyaaseynin waraysiyada kombiyuutarada (Waxaan ka hadli doonaa war dheeraad ah oo ku saabsan wareysiyada kumbiyuutarka laga maamulo qaybta 3.5), Wang iyo asxaabtuba waxay leeyihiin xog ururin aan qaali ahayn, taas oo u suurta gelisay inay ka soo ururiyaan macluumaadka ka yimid 345,858 oo gaar ah , tiro aad u tiro badan oo ah heerarka doorashada ee doorashada. Tiradan saamiga ah waxay awood u yeelatay inay sameystaan ​​tiro badan oo ah kooxo dib-u-dhigis ah. Dhinaca kale, dib u-dhiska ka dib wuxuu ku lugleeyaa dadweynaha boqollaal kooxood, Wang iyo jaaliyada waxay u qaybiyeen dadweynaha 176,256 kooxood oo lagu qeexay jinsiga (2 qaybood), jinsiyadda (4 qaybood), da'da (4 qaybood), waxbarashada (4 qaybood), gobolka (51 qaybood), Aqoonsiga xisbiyada (3 qaybood), fikrado (3 qaybood), iyo sanadka 2008 (3 qaybood). Si kale haddii loo dhigo, tiradooda weyn ee tirakoobka, taas oo ay u suurta gelisay ururinta macluumaadka qiimaha jaban, waxay u suurtagashay inay sameeyaan fikrado badan oo loola jeedo habka qiyaasida.
Xitaa iyada oo 345,858 ka mid ah kaqeybgalayaasha gaarka ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray wali kooxo badan oo ay Wang iyo saaxibadood aysan ku jirin wax jawaab ah. Sidaa darteed, waxay adeegsadeen farsamo la yiraahdo regression multilevel si ay u qiyaasaan taageerada koox kasta. Dhab ahaan, si loo qiyaaso taageerada Obama ee ku jirta koox gaar ah, macluumaadka badan ee kuxirsan ayaa xog badan ka ururiyay kooxo badan oo xiriir la leh. Tusaale ahaan, isku day inaad ku qiyaaso taageerada Obama ee ka mid ah gabdhaha Hispanics ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 29 jir, kuwaas oo ka qalin-jebiyey jaamacadaha, kuwaas oo ay diiwaangashan yihiin Democrats, kuwaas oo is-aqoonsaday sida dhexdhexaad ah, kuwaas oo u codeeyay Obama 2008. , koox aad u gaar ah, waxaana suurtagal ah inaan qofna ku jirin tusaalahan sifooyinkaas. Sidaa daraadeed, si loo qiyaaso kooxdan, isbeddelka badan ayaa isticmaalaya habka tirakoobka si loo wada qiyaaso qiyaasta dadka ka midka ah kooxo isku mid ah.
Sidaa daraadeed, Wang iyo saaxiibadaa waxay adeegsadeen hab ay isku dhejiyeen nidaamka isku-dhafan iyo dib-u-dhiska, sidaas darteed waxay ku magacaabeen istraatijiyadooda dib-u-dhiska ee dib-u-dhiska ama, si naxariis leh, "Mr. Markii Wang iyo saaxiibadood ay adeegsadeen Mr. P. si ay u qiyaasaan tusaalooyinka XBox aan la ogaan karin, waxay soo saareen qiyaaso aad u dhaw taageerada guud ee Obama ee ka helay doorashadii 2012 (Tirada 3.8). Dhab ahaantii qiyaasahoodu waxay ka saxnaayeen wadarta guud ee ra'yi ururinta fikradaha dadweynaha. Sidaa daraadeed, kiiskan, isbeddelka tirakoobka-gaar ahaan Mr. P.-wuxuu u muuqdaa inuu qabanayo shaqo wanaagsan oo sax ah oo ku saabsan xakamaynta xogta aan macquul ahayn; xudduudaha oo si cad u muuqda marka aad eegto qiyaasaha laga helay xogta Xbox ee aan laxiriirneyn.
Jaantuska 3.8: Qiyaasaha W. Wang et al. (2015) . Saamaynta XBox ee aan la isku-beddelin ayaa soo saaray qiyaas aan sax ahayn. Hase yeeshee, muunadda miisaanka culus ee XBox ayaa soo saartay qiyaaso in ka badan oo sax ah intii ay ahayd celcelis ahaan qiimaynta telefoonka ee suurtogalka ah. Waxaa laga soo qaatay W. Wang et al. (2015) , tirooyinka 2 iyo 3.
Waxaa jira laba cashar oo muhiim ah oo ka yimid daraasadda Wang iyo asxaabta. Marka hore, shaybaarro aan la isku halleynin oo aan la qooneynin waxay keeni kartaa qiyaaso xun; Tani waa cashar ay cilmi-baarayaal badani horay u maqleen. Si kastaba ha ahaatee, casharka labaad, ayaa ah, in shay-baarku aan macquul ahayn, marka loo fiiriyo si sax ah, dhab ahaantii soo saari karo qiyaaso wanaagsan; Shay-baarka aan macquul ahayn uma baahna in uu si toos ah u hogaamiyo wax la mid ah fiyuuska suugaanta saxaafadda .
Hore u sii soco, haddii aad isku dayeyso inaad go'aansato inta u dhexeysa isticmaalka habka sirta ee suurtogalka ah iyo habka siyaabaha aan sinnaanta laheyn waxaad la kulmi doontaa doorasho adag. Marmarka qaar cilmi-baarayaashu waxay rabaan xeer deg-deg ah oo qallafsan (tusaale ahaan, marwalba isticmaal dariiqooyinka tijaabada ah ee suuragal ah), laakiin way sii adkaanaysaa in ay bixiso sharcigan. Cilmi-baarayaashu waxay la kulmaan doorasho adag oo u dhaxaysa hababka saami-sameynta ee ficil ahaanta- kuwaas oo sii kordhaya oo qaali ah oo ka fog natiijooyinka farsamooyinka ee caddaynaya adeegsigooda iyo hababka saami-sameynta ee aan loo badnayn - kuwaas oo ka jaban oo dhakhso badan, laakiin aan la garanayn oo isbeddela. Hal shay oo cad, hase yeeshee, haddii aad ku qasban tahay inaad ku shaqeysid shaybaarro aan macquul ahayn ama ilaha xogta weyn ee aan shukaansaneyn (ka feker cutubka 2), markaa waxaa jira sababo xooggan oo lagu rumaysan karo in qiyaasaha la isticmaalay isticmaalka dambe iyo farsamooyinka la xiriira waxay ka fiicnaan doonaan kuwa aan la hagaajin, qiyaasta cayriinka.